5ရိယာ XNUMX - ATLAS Tenerife အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
Socorro သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်အံ့ Views ဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများနှင့်အတူကြီးမားသောအိမ်!
ရောင်းရန်: Socorro ကမ်းခြေအထက်၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်ဆိုကရိုရိုကမ်းခြေကိုမြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံသောလှေခါးထစ်သုံးခု! Penthouse တိုက်ခန်းပေါ်တွင်သီးခြားစီ ...
La Orotava ရှိအိမ် + ဂိုဒေါင် + လှပသောရှုခင်းများ !!
ရောင်းရန်: La Orotava, Tenerife တွင်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများပါသောလှပသောအိမ်ခြံမြေများ! မိနစ်အနည်းငယ်အကွာတွင်တည်ရှိသောတိတ်ဆိတ်သောလူနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်ကောင်းသောနေရာ။
Los Realejos ရှိမြို့ဟောင်းတွင်အံ့ Views ဖွယ်ကောင်းသည့်မြင်ကွင်းများပါသောကျယ်ဝန်းသည့်အိမ် !!
ရောင်းရန်: Los Realejos, Tenerife ရှိမြို့ဟောင်းတွင်အလွန်ကောင်းသောရှုခင်းများပါသောလှပသောအိမ်ခြံမြေများ! လှပသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်အနည်းငယ်သာကွာဝေးသောနှစ်ထပ်ခွဲအိမ်တစ်အိမ်နှင့် ...
La Orotava တွင်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများပါရှိသည် Penthouse
Tenerife, La Orotava တွင်ရောင်းရန်ကျယ်ဝန်းသော Penthouse တိုက်ခန်း။ ခေတ်မီအဆောက်အအုံကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်၊ ဓာတ်လှေကားနှင့်သီးခြားသိုလှောင်ခန်း။ လှပသောလှေကားထစ်များ ...
ဟိုတယ်အသုံးပြုရန်အတွက် City Mansion ။ la Orotava
Tenerife တွင်ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစတင်ပါ။ Puerto de La Cruz အနီးရှိ La Orotava ရှိသမိုင်းဝင်နေရာတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအိမ်ကြီး။ တင့်တယ် ...